Shirkadda Telesom oo Daah-furtay adeega casriga ah ee TELESOM CLOUD SERVICES | Dhaymoole News
August 15, 2017 - Written by wariye999
Hargeysa(dhaymoole)Shirkadda Isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom ayaa 15 August 2017 magaaladda Hargeysa markii ugu horeysay ku daah-furtay adeega cusub Telesom Cloud. Adeegan oo ah kii ugu horeeyey ee dalka laga hirgaliyo, shirkadda ayaa sidoo kale 10 computer iyo adeega Cloud ugu deeqday 10 ka mid ah iskuuladda dawladda si ay ugula tartamaan kuwa gaarka loo leeyahay dhinaca tiknoolajiyadda.
Xafladda Daah-furka adeegan oo ka dhacday huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaa ka soo qayb-galay Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Wasiirka Tiknoolajiyadda, Cilmi baadhista iyo Xidhiidhka Golayaasha, Agaasimaha komishan ICT-ga , marti-sharaf kala duwan oo ka
socday shirkadda waaweyn ee dalka, Jaamacadaha dalka, hay’addaha caalamiga ah, hay’addaha maxaliga ah, masuuliyiin ka socday warshadaha dalka ka jira, shirkadaha IT-ga iyo marti-sharaf kale oo badan.
“Waxaa farxad noo ah in aad nagla soo qayb-gashaan xafladan aanu ku daah-furayno adeegga cusub ee loo yaqaano Cloud Computing (Keydka Daruuraha) ama Telesom Cloud Services. Sidaad hore uga barateen in Telesom markasta ay ahayd Telesom 1st, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay Internet, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay moobayl, shirkaddii ugu horeysay ee waddanka keentay mobile money ZAAD iyo waxyaalo badan. Maanta waxaynu u joognaa inaynu daah-furno adeegan cusub ee Telesom Cloud Services”, sidaasi waxaa yidhi Agaasime Cabdiwahaab Maax